လင်္ကာ: မိခင်တစ်ဦး၏ကိုယ်တွေ့မှတ်တမ်း- အပိုင်း( ၃ )
.ရေနွေးအိုးတည်ပြီးမှရေအေး နဲ့ရောပြီးမျက်နှာသစ်ရတယ်… ဒီနေ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီး ထမင်းမစား ခင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ ထောက်လှမ်းရေး သန်းဇော်နဲ့ကိုယ်တို့(၇)ယောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားကြတယ်…. ဘုန်းကြီး(၂)ပါးဘဲတွေ့ရတယ်…နဲနဲအသက်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကမိုးညှင်းကတောခိုလာတာတဲ့…. ဖမ်းထားတဲ့ကလေးတွေကိုအပြစ်နဲနဲပြောတယ် ….
ဘွဲ့အမည်ကဦးဣန္ဒာ စာရ တဲ့…..မုန့် တစ်ထုပ် လှူခဲ့တာ မှတ်မိ ပါတယ်….
မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ ပါဂျောင်ချောင်းဘက် လိုက်ပြမယ်ဆိုပြီး ထလရတာဝန်ခံသန်းဇော်၊ တာတီးပိုး(ခ)သက်လင်း၊ဖိုးနှောင်း၊သက်ထွန်း၊ဂျပန်သတင်းထောက်နဲ့ကိုယ်တို့(၇)ယောက်
လိုင်စင်စခန်းကနေပြီးဟိုဘက် KIA လားတပ်ရှိတဲ့ဘက်ကို သွားတဲ့လမ်း….. ကိုယ်တို့နေတဲ့တောင်ကုန်းကကြည့် ရင်…သွားလာနေ တာအား လုံးမြင်နေရတယ်..
ပါဂျောင်ချောင်းက ကိုယ်တို့နေတဲ့နေရာရဲ့ အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိ တယ်…
…ကျောက်တုံးတွေကိုဖြတ်စီးနေပြီး ကြည်ပြီး အရမ်းအေးတယ်….ကိုယ်တို့က ပါဂျောင်တံတားပေါ်ကနေရပ်ကြည့် နေကြ တယ်…သန်းဇော် နဲ့အဖွဲ့ က တံတားတစ်ဖက် ကတောင်ကုန်းမှာ ပစ်မှတ်ထားပြီး သေနတ်အတိုနဲ့ လက်တည့်စမ်းပစ် တယ်….
အားလုံး၁၄ချက်ပစ်တယ်….သေနတ်သံတွေအဆက်မပြတ်ကြားတော့ တောင်ကုန်းပေါ်ကKIA တပ်သားတွေတောင်အောက်ကို လှမ်းကြည့်တယ်….နောက်ဘာမှမဖြစ်မှန်းသိတော့ပြန်ဝင်သွားကြတယ်….
ဥက္ကဋ္ဌကို၂ချက်ဘဲပစ်မယ်ပြောခဲ့တာတဲ့…ခုတော့၁၄ချက်ပစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီး ကျည်ခွံတွေရေနေ တယ်……ပြီးတော့တဲကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်….ကလေးတွေမြင်ရမလားဆိုပြီး သူတို့နေတဲ့ တောင်ကုန်းကို လှမ်းကြည့်ဖြစ် တယ်…တဲရောက်တော့ ထမင်းစားပြီးခဏနားကြတယ်…
၂း၀၀နာရီလောက် ဥက္ကဋ္ဌကVIDEO ကြည့်ဘို့ဆိုပြီးလာခေါ်တော့အားလုံးတောင်ဝှေးတွေထောက်ပြီး လိုက်သွားကြတယ်….ဥက္ကဋ္ဌတဲကိုပထမဆုံးရောက်ဘူးတာပေါ့…ဟို ကျတော့စကားတွေပြောရင်း VIDEO အခွေ ဖွင့်ပြတယ်….. သူတို့ထောက်လှမ်းရေးလို့စွပ်စွဲထားတဲ့ သူတွေကို စစ်ချက်ယူနေတဲ့ ပုံတွေဘဲ….
ကြည့်ရတာ လိမ်ထားတာတွေဆိုတာသိရတော့ မကြည့်ချင်ဘူးပေါ့….ပထမ ကိုစိန် ကိုစစ်ချက် ယူနေ တဲ့ပုံဒုတိယက ချိုကြီးပုံ….သူ့ရှေ့စက္ကူပေါ်မှာလည်း အဆိပ်မှုန့်လို့ပြောတဲ့ အမှုန့်တွေ….ကြည့်ရတာမြေ မှုန့်တွေ လို့ဘဲထင်တယ်…..အဆိပ်အာနိသင်ကလည်း စားရင်ချက်ချင်း မသေဘဲ တဖြည်းဖြည်း မှ သေတယ်တဲ့….
ကြည့်တဲ့သူတွေက မယုံဘူး….နောက် ကိုယ့်သား ရဲလင်း အလှည့်လည်းရောက်ရော လက်ပြန်ကြိုး တုတ်ပြီးစစ်နေတာ….သားကပြုံးပြီးဖြေနေတာတွေ့တယ်….ငယ်ငယ်က ဘယ်လောက်စိတ်ညစ်ညစ် ပြုံးနေ တတ်တဲ့အကျင့်….သူ့ကိုဖမ်းပြီးစစ်နေတာကို ပြုံးပြီးဖြေနေတယ်….လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ထားပြီး ယူနီဖောင်း အစိမ်းနဲ့….ဆံပင်ကဂုတ်ထောက်နေတယ်…..၂၀.၃.၁၉၉၂နေ့ကတွေ့တဲ့ပုံနဲ့လုံးဝမတူဘူး…..သူ့ ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဘူး…မျက်ရည်တွေကျလာတယ်….
သူ့ပုံကိုဘဲအကြာကြီးပြနေတယ်….နောက်တော့နန်းအောင်ထွေးကြည်….ဘိုဘို တို့ကိုစစ်နေ တာပြတယ်..ခဏနေတော့ပိတ်ပြီး စကားပြောကြတယ်….
အန်တီတို့က နောက်ပိုင်းမှာလည်း အလုပ်တွေနဲ့….မကျန်းမာတဲ့သူကလည်း မမာ ဘူး… .အိမ်ကိုပြန် ချင်ကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကလေးတွေနဲ့အတူ ပြန်ရအောင်စီစဉ်ပေးဘို့ပြောတော့နေဒွန်းက ကလေးတွေကိုသူတို့လုပ်ထားတဲ့အပြစ်အတွက်…ပြစ်ဒဏ်ကြေအောင်လုပ်ရဦးမှာဖြစ်ကြောင်း…
ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို မိဘတွေနဲ့ယခုမထည့်နိုင်သေးကြောင်း ပြောတယ်…..
အဲဒီလိုပြောတော့ အားလုံးက …ဟင်…ဒါဆို….ကလေးတွေအခုကျခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်နဲ့ မပြီးသေး ဘူးပေါ့…..နောက်ကျခံရဦးမှာပေါ့…..အဲဒီလိုဆိုရင်သားသမီးတွေနဲ့ အတူဒို့လည်း ပြစ်ဒဏ်ခံယူမယ်… .သူတို့နဲ့အတူလွတ်မှပြန်ကြမယ်လို့ပြောတယ်….ဒါလည်းသူတို့ကမဟုတ်သေးဘူး….မိဘတွေမှာ ဘာအပြစ်မှမရှိလို့ အပြစ်ပေးစရာမလိုဘူး….ပြန်နှင့်ပါလို့ပြောတော့….
အန်တီကြီးကငိုပြီး ခြေသလုံးဖက်မယ်လုပ်ပြီး ဥက္ကဋ္ဌကြီးတို့ကို ဘယ်လိုတောင်းပန်ရမှာလဲလို့
ဆိုပြီး….ငိုရော…..အားလုံးက၀ိုင်းငိုကြတာပေါ့….အနားမှာဂျပန်သတင်းထောက်ရှိတယ်…ဓာတ်ပုံရိုက်မှာကို ကိုအောင်ကြီးက မရိုက်ရဘူးပြောတယ်…..အဲဒါနဲ့ မမြင့်မြင့်ကြည်ကလည်း…မင်းတို့ကိုယုံကြည် မိတာ မှားပြီဆိုပြီး ငိုကြရော…..
၅း၀၀နာရီလောက်ရှိတော့ ထမင်းကိုဥက္ကဋ္ဌတဲမှာကျွေးဘို့ပြင်ပြီး ထမင်းစားဘို့ခေါ်တယ်…. အားလုံး ကလက်တို့ပြီး ထမင်းမစားဘဲအစာငတ်ခံမယ်လို့ လုပ်ထားကြတယ်…..ထမင်းစားခေါ်တော့ အန်တီ တို့မ စားတော့ဘူး….စားလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုပြီး အားလုံး ကငြင်းကြတော့ …..
အန်တီတို့ထမင်းမစားရင် အန်တီတို့သားသမီးတွေနဲ့ပေးမတွေ့တော့ဘူးလို့….သန်းဇော်တို့ ကပြောတော့….ကိုယ်တို့လည်းသားသမီးတွေနဲ့ပေးမတွေ့မှာစိုးလို့ လန့်ပြီးထမင်းစားရတယ်….. တစ်လုပ်နှစ်လုပ် စားတာပါ…..အနားကနေပြီးခွံ့မတတ် ချော့ပြီးဝိုင်းကျွေးကြ တယ်….
ဥက္ကဋ္ဌလည်းစိတ်ဆိုးနေတယ်တဲ့……သူတို့စေတနာကိုမိဘတွေကနားမလည်ဘူးဆိုပြီး စိတ်ဆိုးနေတာ တဲ့…….ဒါနဲ့ ထမင်းစားပြီးတဲကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်…..
တဲရောက်တော့ မီးစက်ကလည်းဆီမရှိလို့ ကလေးတွေနဲ့ဒီနေ့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့…. ကိုယ်တို့လည်းနားလည်လိုက်တယ်….ဒီနေ့ ညထောင်ထဲသွားပြီးသားသမီးတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်မ လိုက်အောင်….နားသွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနား လည်လိုက်ပါတယ်…..နောက်နေ့တွေ့ရင် အဖြေတစ် မျိုးတော့ ထွက်မှာလို့တွေးပြီးအိပ်ယာဝင်ကြတယ်….တတ်လည်းတတ်နိုင်…ကောက်လဲကောက်ကျစ်ပါပေတယ် လို့….နောက်နေ့ကျရင်ကလေးတွေရဲ့ သဘောထားလည်းမေးကြည့်ပါ ဦးလေလို့ပြောတယ်….. ကိုယ်တို့ ကတော့ ကလေးတွေရဲ့သဘောထားအမှန် မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာသိနေပါပြီ……
မနက်စောစော ကလေးတွေနဲ့တွေ့ရဘို့စောင့်နေကြတယ်….မနက်စာစားပြီး ၁၂း၀၀နာရီလောက်ကိုယ့်ကိုအရင်လာခေါ်တယ်….ဒီတစ်ခါတော့စစ်ရုံးထဲမှာတွေ့ရတယ်….သားတယောက်ထဲအရင်ရောက်နေတယ်….
.ရောက်ရောက်ချင်းအမေထမင်းစားပြီးပြီလား နေကောင်းလားလို့လို့မေးတယ်…. နေသိပ်မကောင်းဘူး…. စိတ်လဲသိပ်မကောင်းဘူး…..
လည်း ဘယ်ဟုတ်မလဲ…သူတို့ကကောင်းတာစီမံတာ မေမေတို့လက်ခံလိုက် ပါ…ကြက်ခြေနီ လိုအဖွဲ့ အစည်းတ ခုခုက လာခေါ်ရင်လိုက်မှာပါလို့ ပြောတယ်….မရဘူးမေမေတို့နဲ့တစ်ခါ တည်းလိုက်ရ မယ်ပြောတော့ ……
သားမျက်လုံးမှာမျက်ရည်တွေနဲ့…….စောင့်နေတဲ့ကောင်လေးမသိအောင် ကိုယ့်ခြေထောက်ကို သူ့ခြေဖျားနဲ့ တို့ပြီးမျက်ရိပ်ပြတယ်….ကိုယ်လည်းနားလည်လိုက်ပါတယ်….သူတို့ဆန္ဒအမှန် မပြောရဲ ဘူး….သူတို့လူကြီးတွေအကြိုက်ပြောရတယ်ဆိုတာ…..အဲဒီလိုပြောနေတုံးမှာ….ကျော်နိုင်ဦး၊ နန်းအောင်ထွေးကြည်၊ညီညီတို့လည်းရောက်လာကြတယ်….သူတို့၃ယောက်ကလည်းဝိုင်းပြီးနားချ တာပေါ့လေ….အဲဒါနဲ့ လူကြီးတွေကတော့ ကလေးတွေမပါရင်မပြန်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ် လို့ပြောပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်….
ကိုယ့်အလှည့်ပြီးတော့ အန်တီကြီး….ပြီးတော့ဦးအေးနိုင်ကိုခေါ်တွေ့ပေးတယ်… .သူတို့လည်းငိုယိုပြီးပြန်လိုက်ဘို့ပြောကြဆိုကြပေါ့….အဲဒီနေ့မှာ၎ယောက်ပဲတွေ့ရတယ်….သူတို့ ၄ယောက်ကိုဗိုလ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး အရေးပါတဲ့သူတွေမို့ မလွှတ်နိုင်သေးဘူး လို့ပြောတာတဲ့…. .ညနေစာစားပြီး စကားပြောကြပြီး အိပ်ယာဝင်ကြတယ်….
မနက်အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ် ရွတ်ဖတ်ပြီးတဲပြင်ထွက်ကြည့်တော့ ကိုယ်တို့ ကလေး၅ယောက် (နန်းအောင်ထွေးကြည်နဲ့ဘိုဘိုမပါ) ထောက်လှမ်းရေးတဲဘက် ၀င်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေကြတော့ အနားကတာတီးပိုးတို့ကို ဘာလုပ်နေတာလဲမေးတော့ အန်တီတို့ကလေးတွေကိုလွှတ်လိုက်ပြီလေ ဆိုပြီးပြောတော့…..၀မ်းသာသွားတယ်….ကလေးတွေလည်းထွက်လာကာစဆိုတော့ အ၀တ်အစားတွေ စစ်ရုံးမှာသွားထုတ်နေတာတွေ့တယ်….ကိုယ်တို့လည်းအပေါ်ကကြည့်ပြီးဝမ်းသာနေကြတာပေါ့…..
ဘိုဘိုနဲ့နန်းအောင်ထွေးကြည်အတွက်လည်း အ၀တ်အစားတွေလာတောင်းကြတယ်….ကိုယ်တို့ ကလေး၅ယောက်ကို တောင်ဘက်ကစစ်ရုံးဘေးက တဲအသစ်မှာထားတယ်….(ကော်မတီရုံးသစ်)။ ဂတုံးတွေ နဲ့ခါးပတ်အဖြူတွေနဲ့ဆိုတော့ ထောင်ထွက်တွေမှန်းသိသာတယ်….သူတို့လည်းထွက်လာကာစဆိုတော့ ရေခပ်ဆင်းလိုက် လိုတာသွားယူလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုတ်နေကြတယ်…..မိဘတွေနဲ့လာတွေ့ခွင့်မရဘူး…..
ဘိုဘိုနဲ့နန်းအောင်ထွေးကြည်က ပရိုတင်း(PRO- TEAM) မှာနေရတယ်….နောက်နေ့မှာလုပ် မဲ့ဒေါင်းမိခင်ခန်းမဖွင့်ပွဲမှာ သီချင်းဆိုဘို့ သီချင်းတိုက်နေကြတယ်တဲ့…..ကလေးတွေအားလုံးကဂတုံးတွေ နဲ့ယူနီဖေါင်း အစိမ်းတွေနဲ့ဆိုတော့ အားလုံးတူနေကြတယ်….ညီညီကဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူး သိသာတယ်… .ခြေတစ်ဘက်ကနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ကြောင့် ထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်နေတယ်….ကျော်နိုင်ဦးနဲ့ ရဲလင်းက အဝေးကကြည့်ရင်တစ်ပုံစံထဲဘဲ…
ညီညီအောင်နဲ့ဝဏ္ဏဇော်ကကုပ်ကုပ်ကုပ်ကုပ်နဲ့ ခွဲမရဘူး…..တစ်ယောက်ထွက်လာရင် သူ့သားကိုယ့်သား နဲ့ခွဲနေကြရတာ အမောပါဘဲ…..
မှာဘယ်ဘက် ဒုတိယတန်းမှာထိုင်တယ်….ရှေ့ဆုံးမှာတော့ ဘုန်းကြီးတွေထိုင်တယ်… ကိုယ်တို့နောက်မှာ သားတွေထိုင်ပြီး….သူတို့ဘေးမှာသန်းဇော်နဲ့အဖွဲ့ထိုင်တယ်….နောက်မှာဧည့်သည် အချို့နဲ့ကျောင်းသား တပ်ကလူတစ်ချို့….အဲဒီနောက်မှာတော့ ထောင်ထဲက ကလေးတွေထိုင်ကြတယ်….ညာဘက်ထိပ်ဆုံး မှာတော့ ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေထိုင်ကြတယ်….နောက်ဂျပန်သတင်းထောက်…နောက်ပြီး NLD ကတောခိုလာတဲ့၅ယောက်ထိုင်တယ်….နောက်ပြီးKIA အရာရှိ၊အရာခံ၊အကြပ်၊တပ်သားတွေ ထိုင်တယ်… .အရာရှိကတော်နဲ့ကလေးငယ်တယောက်ပါတယ်….နောက်မှKIA ကန်တင်း(CANTEEN) က တာဝန်ခံ မနှင်းမေဆိုတာသိရတယ်…အားလုံးနေရာယူပြီးတော့ ခန်းမဆောင်ဖွင့်ဘို့အတွက် အားလုံးအပြင်ထွက်ပေး ရတယ်……ဖွင့်ရင်သေနတ်ဖေါက်မှာမို့မကြောက်ဖို့လာပြောကြတယ်….
အပြင်ထွက်ပြီး အားလုံးမတ်တပ်ရပ်……ဥက္ကဋ္ဌအောင်နိုင်ကဖဲကြိုးဖြတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်….. ခန်းမထဲဝင်ပြီး ကိုယ့်နေရာကိုယ်ထိုင်ကြတယ်….ကိုမောင်မောင်က ကိုယ့်သားနဲ့အတူထိုင်ရအောင် စီစဉ် လိုက်တယ်….
တကယ်ကျတော့သူတို့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းထိုင်ရတော့ အလှမ်းဝေးနေတာပေါ့….ဖွင့်ပွဲမိန့်ခွန်းကိုဥက္ကဋ္ဌ၊ NLD ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ဘုန်းကြီးတစ်ပါး၊ KIA ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ကပြောတယ်…
ကိုယ်တို့ဘက်ကလည်းတက်ပြီးပြောခိုင်းရင် ကိုယ်တို့ခံနေရတဲ့အကြောင်းတွေပြောမယ်ဆိုပြီး စီမံထားတာ…သူတို့ကသိလို့လားမသိဘူး….စကားပြောဘို့စီစဉ်မပေးဘူး……ဧည့်သည်တွေကလည်းကိုယ် တို့ကိုအထူးအဆန်းဝိုင်းကြည့်ကြတယ်….NLD ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဆို စင်ပေါ်ကိုမျက်နှာမရောက်ဘူး….
သိုးမွှေးစောင်ကိုမျက်နှာဖုန်းပြီးခြုံထားရတယ်….သားတွေကအနားမှာရှိတုံး ပြောချင်တာပြောရတာ….. ခွဲတမ်းရတဲ့လ္ဘက်ရည်ကိုသားကိုပေး…မုန့်ကျွေး၊ ဆေးလိပ်တွေပေးနဲ့….သားကလည်းလ္ဘက်ရည်
NLD ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက အပေါ့သွားရာကအပြန် ကိုယ့်ကိုလာနှုတ်ဆက်တယ်….ကလေးတွေအကြောင်းကိုကြားပါတယ်တဲ့….သူတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးတဲ့….လူသတ်တယ်ဆိုတာဘယ်အဖွဲ့အစည်းမှမကောင်းပါဘူးလို့ ပြောပြီး သူ့နေရာသူပြန်သွားတယ်….
မိန့်ခွန်းတွေပြောပြီး ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်စတယ်…..ဘိုဘိုနဲ့နန်းအောင်ထွေးကြည်တို့လည်း ဆိုခိုင်းလို့သာဆိုရတာမျက်နှာမကောင်းကြဘူး…..အန်တီကြီးလည်းသူ့သမီးဆိုတာကြည့်ပြီးငိုတော့ ဆေး ဆရာမဘောက်မိုင်တို့လာပြီးချော့ကြတယ်….ဘိုဘိုကမေမေရေဂုဏ်ယူလိုက်ပါသီချင်းဆိုတော့ သူ့အမေ လည်းငို ... ကိုယ်တို့လည်းမျက်ရည်ကျ… ထောင်သားတွေလည်းငိုကြတယ်….
( ထောင်သားတွေကမိဘတွေလိုက်လာတယ်ကြားတော့ မိဘတွေကိုဒီကောင်တွေ တခုခုလုပ်ကြည့်….အကောက်ကြံရင် ထောင်ဆူပစ်မယ်လို့ တိုင်ပင်ထားကြ တာ တဲ့….မိဘတွေမီးလှုံရတာထင်းမရှိဖြစ်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး လူ၆ယောက်…ထင်း၆စည်း…သူတို့သဘောနဲ့သူတို့ လာပို့သွားကြတယ် …ထောင် သားတွေခြေ ကျင်းတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာတွေ့ရင် သနားပြီးမျက်ရည်ကျရတယ်…..)
တာတီးပိုးကအန်တီတို့သားတွေလည်း အန်တီတို့မလာခင်က ဒီလိုဘဲလုပ်ရတာတဲ့….တဲဆောက်တဲ့သူကဆောက်…၀ါးခုတ်တဲ့သူကခုတ်…ထရံယက်တဲ့သူကရက်နဲ့ ထမင်းစား ချိန်ဘဲနားရတယ်တဲ့….. )
ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်ပြီးတော့ ၁၀နာရီကျော်ပြီ….တန်းစီပြီးထွက်လာတော့ NLD ကကိုယ်စားလှယ်တွေကထလာပြီး တစ်ယောက်ချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်….VIDEO ကလည်းရိုက်နေ တယ်….၁၀း၃၀လောက်တဲပြန်ပြီးအိပ်ယာဝင်တယ်…..
မနက်စောစော ထပြီး မျက်နှာသစ် ဘုရားစာရွတ်ကြတယ်… မမြင့်မြင့်ကြည်ကလည်း တဲရှေ့ထွက်ပြီးဘုရားစာရွတ်…ကိုယ်ကလည်းမျက်နှာသစ်ရင်းနဲ့ ထောင်ရှိတဲ့ဘက်ကိုကျောင်းသား
တစ်ယောက်ဘုန်းကြီးကျောင်းဘက်သွားပြီးဘုန်းကြီးကိုဥက္ကဋ္ဌကခေါ်ခိုင်းလို့လို့ပြောတယ်… .တောင်ဘက်ကိုကြည့်နေတုံး ကျောင်းသားတစ်ချို့ကရှေ့က…
တာတွေ့တော့….စောင့်တဲ့ရဲမေ၂ယောက်ကိုမေးတော့…..ညကထောင်သားတစ်ယောက် နေမကောင်းလို့ ဆုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်….
သေတဲ့ကလေးကမိဘမသိဘဲသေရပြီ…..မိဘတွေကတော့သားတွေတောထဲမှာဘဲရှိနေတယ် ထင်မှာဘဲ…ဆိုပြီး မိဘချင်းသားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး သနားနေကြတယ်….
နောက်တော့အန်တီကြီး၊ကိုမောင်မောင်၊ဦးအေးနိုင်၊မမြင့်ကြည်…တို့ KIAဘက်ကကန်တင်း(CANTEEN)ကိုသွားကြတယ်….သားသမီးတွေကိုမထည့်ဘူးပြောထားတော့ အားကိုးစရာအသိများတွေ့မလားဆိုပြီးသွားကြတာ….အဲဒီက၀ယ်လာတဲ့မုန့်တွေစားပြီးတစ်ရက်ကုန်ပြန်ရော….
မနက်စောစောထုံးစံအတိုင်း ရွတ်ကြဆိုကြပေါ့…..ရောက်ခါစက ကိုမောင်မောင်နဲ့ဦးအေးနိုင်က သူတို့တဲမှာထမင်းစားပြီးမှ ဆင်းလာကြတယ်…. ခုတော့ကိုယ်တို့တဲမှာဘဲစုစားကြတယ်…ထမင်းစားတိုင်း ဦးအေး နိုင်က ထမင်းစားမြန်တော့ အရင်ကုန်တာကိုး…အဲဒါကျုပ်ပန်းကန်ကပေါက်နေလို့ဆိုပြီး ဟာသပြော ပြီးထပ် ထည့်စားတယ်….ရောက်ခါစကသိပ်စားလို့မကောင်း ဘူး…နောက်တော့ထမင်းကလွဲပြီးစားစရာ မရှိတော့ထမင်းဘဲ တစ်နပ်ပြီးတစ်နပ်မျှော်ကိုးစားနေရတာကိုး….စားလို့ကောင်းနေကြတာပေါ့….ထမင်း စားတိုင်း ကိုယ့်ဟာမဟုတ် လို့စားတာလား….ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်လို့စားတာလား…အားလည်းနာတယ်ဆိုပြီး အားရပါးရစားကြတာပေါ့… ကိုယ်တို့ကိုကျွေးတာ သူတို့စားနေကျ ရာရှင်ထက် တစ်ပတ်ကို၇၅၀ကျပ်ဘိုး ပိုကျွေးတယ်လို့ပြောတယ်….. တာတီးပိုးကလူငယ်ဆိုတော့ကြွားချင်တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်…ဆက်သွယ်ရေးစက်ကို ၁နာရီတစ်ခါဖွင့် ရတော့ ကိုယ်တို့တဲပေါ်လာပြီးနားထောင် တယ်….ဟိုဘက်ကလည်းစစ်ရေးစစ်ရာဘာမှမပါဘဲနောက်နေ တယ်…ဧည့်သည် တွေပြန်သွားပြီလား ၀က်ဝံကိုယ်စားဘယ်သူလာလဲမေးတော့ သူ့မားသားကြီးလာ တယ်ပြောတယ်…နောက်မှဝက် ၀ံဆိုတာ အမျိုးသမီးကိုပြောမှန်းသိရတယ်….
မမြင့်မြင့်ကြည်တို့ကလည်း သရဲတစ္ဆေအကြောင်းအရမ်းပြော တယ်….ညတိုင်းပြော တယ်…ကျောင်း သား တစ်ယောက်ကသေထားတာမကြာသေး….အစကတည်း ကလူတွေကိုသတ်ပြီးဘယ်နားမြှုတ် ထားမှန်းမသိ…ကိုယ် တို့နေတဲ့တောင်ကုန်းမှာမြှုတ်သလား….သတ်သလားမ သိ….ထောက်လှမ်းရေးတဲမှာ လည်း စစ်ရင်းဆေးရင်းသေ.. လူသေကိုအုပ်တဲ့ပလတ်စတစ်တောင် ကိုယ်တို့တက်နင်းပြီး ဆင်းရတက်ရ တာနောက်မှသိရတော့ဖယ်ခိုင်းပစ်ရတယ်…သူတို့ကလည်းညတိုင်း လူသေတွေအကြောင်း သရဲတစ္ဆေတွေ အကြောင်းပြောနေတော့ညဘက်ဆိုအပြင်မထွက်ရဲကြတော့ဘူး….ပြောပါများလွန်းတော့ အန်တီကြီးတို့ အန်တီစန်း တို့လည်း ကြောက်လာကြတယ်… တာတီးပိုးကိုလည်း စိတ်ဓာတ်ကျအောင် သရဲအကြောင်း အစိမ်းသေတွေမကျွတ်ဘဲ သတ်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးခြောက် လှန့်ကြောင်းပြောတော့သူလည်းကြောက်လန့်ပြီး ညဘက်ဆို ကိုယ်တို့တဲကိုမလာရဲတော့ဘူး…..
နေ့လည်ကျတော့ ကျန်တဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေက ( ဥက္ကဋ္ဌ မပါ) သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြော တယ်.. ဗိုလ်အဆင့်ရှိတဲ့( ၄ )ဦးကိုမလွှတ်ဘူး…..ကျန်တဲ့( ၃ )ဦးကိုစဉ်းစားဆဲဖြစ်ကြောင်းပြောပြ တယ်…ကိုယ်တို့လည်း အတိုက်အခံပြောတာမရဘူး….အန်တီတို့အကျိုးဘဲမကြည့် ဘို့….ကလေးတွေ အတွက်နဲ့ သူတို့အဖွဲ့အစည်းအ ကျိုးကိုကြည့်ဘို့နဲ့…..နောက်ဆုံး၃ဦး၃ဖလှယ် ဆွေးနွေးဘို့ ပြောပြီး ကိုယ့်တဲကိုယ်ပြန်ကြတယ်….
နောက်နေ့မှာ ကလေးတွေကို တခုခုကျွေးချင်လို့ လိုင်စင်ဈေးဘက်ကို ခဏခေါ်သွားမယ်လို့ပြောတာ ခေါ် သွား ခွင့်ပေးတယ်…
မနက်စောစောထပြီး လိုင်စင်ဈေးနေ့မှာ ကလေးတွေကိုခေါ်သွားပြီး ရှမ်းခေါက်ဆွဲကျွေး လ္ဘက်ရည်တိုက် တယ်….လမ်းမှာသူတို့အစောင့်တွေလစ်တုန်း ပြောချင်တာတွေပြော ရတယ်….၁၁း၀၀ နာရီထိနေပြီးပြန်ခဲ့တယ်… သားကိုငွေ၃၀၀ကျပ် ပေးခဲ့တယ်….ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့သူ့မွေးနေ့မှာ ဘုန်းကြီး ဆွမ်းကပ်မယ်ပြောတယ်…သားတွေကိုဘုရားတရားမမေ့ဘို့ ဂါထာတွေရွတ်ဖို့ပြောရတယ်… ညနေ ပါဂျောင်ချောင်းဘက်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ KIA ကဗိုလ်မှူးကြီး လဇန်ဘောက်ဆိုတာနဲ့တွေ့တော့ ကိုယ်တို့၃ဦးကတာတီးပိုးရှေ့ရောက်နေပြီ…နောက်မှာကျန်ခဲ့တဲ့အန်တီကြီး၊မမြင့်မြင့်ကြည်၊ ကိုမောင်မောင် တို့ကိုဗိုလ်မှူးကြီးက နှုတ်ဆက်တယ်….မြို့ကလာကြတာလား…. လမ်းလျှောက်ကြသလားလို့မေး တယ်….စကားပြောနေတာမြင်တော့ တာတီးပိုးကချက်ချင်းနောက်ပြန်သွားတယ်.. အန်တီကြီးကလည်း စကားပြောရပ်လိုက်ရတယ်….
မနက်စာစားပြီး KIA အရာရှိကားတစ်စင်းရပ်တာတွေ့တယ်…အန်တီကြီးကို ဥက္ကဋ္ဌတဲလာဘို့ခေါ်တယ်… မမြင့်ကြည်ပါလိုက်သွားတယ်…အန်တီကြီးက ကလေးတွေကိစ္စပြောပြတော့… ဒီအဖွဲ့နဲ့မဟာမိတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်…အကူအညီသာပေးလို့ရတာ…..သူတို့လုပ်ရပ်ကို ၀င်စွက်ဖက် လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း…သူတို့KIA တပ်မှာဒီလောက်ထောက်လှမ်းရေးများများ မဖမ်းမိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်း….ဖမ်းမိရင်လည်းတစ်ယောက်တလေသာ ဖမ်းမိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ကလေးတွေလွတ်လမ်း ကိုကူ ညီနိုင်ဘို့ အလားအလာမရှိကြောင်း အန်တီကြီးသိလာတယ်..
( ၁ ) ကလေးတွေကို နောက်ထပ် ထလရ မလုပ်ရပါဘူး…ထွက်ပြေးဘို့မစည်းရုံးရပါဘူး….ထွက်လည်း မပြေးပါ ဘူး….
(၃)ကြက်ခြေနီ(သို့)လွတ်လပ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုလာပါကထည့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းလက်မှတ်ရေး ထိုးကြတယ်….သူတို့ပေးတဲ့ကတိကိုမဖျက်ပါဘူးဆိုတာအထပ်ထပ်ကတိပေးလိုက်တယ်….အားလုံးကိုယ့်တဲ ကိုယ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်….
မနက်စာထမင်းစားပြီးလိုင်စင်ဈေးသွား လ္ဘက်ရည်တိုက် ကြက်ဥတို့ ထန်းလျှက်တို့ဝယ်ပေးလိုက်တယ်.. အဲဒီက၁း၀၀နာရီလောက်ပြန်လာပြီး ကိုယ့်တဲကိုယ်နေကြတယ်…. ကျန်တဲ့ကလေး၃ယောက်ကို လွှတ်မယ် ထင်နေတော့ ကိုယ့်ကလေးမပါလည်း (၃)ယောက်ပါ ရင်တော်ပြီ ဆိုပြီးစောင့်နေကြတာ…
ဗိုလ်အဆင့်ရှိတဲ့ကလေး(၄)ယောက်ကို တာဝန်ပေးအပ်ပွဲလုပ်တယ်….ရဲဘော်အဆင့်နဲ့ပြန်တာဝန်ပေးတာပါ…ကတိသစ္စာဆိုကြရတယ်…ညနေကျတော့ကလေး(၃)ဦးရဲ့မိဘတွေနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်…လွှတ်တော့လွှတ်မှာ ဒါပေမယ့်အခုမထည့်နိုင်သေးကြောင်းဗဟိုမှအမိန့်လာမှလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း… .အ်ိမ်ပြန်ချင်ပါကတစ်ယောက်ချန်ခဲ့ပြီးအားလုံးပြန်နိုင်ကြောင်းပြောတော့….မမြင့်မြင့်ကြည်က သူတစ်ယောက်ထဲနေခဲ့မယ်….အန်တီစန်းကလည်း သူနေခဲ့မယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်….နောက်နေ့မှာ ကလေးတွေအားလုံးနဲ့၃ဦး၃ဖလှယ်တွေ့ဘို့ပြောလိုက်ကြ တယ်….ဘိုဘိုကသူ့အမေကိုမနေခဲ့ဘို့အတန် တန်ပြောတယ်….
ဒီနေ့မှာတော့ ကလေးတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ပေးမယ်ဆိုလို့ မနက်ကတည်းကလာအခေါ်ကိုစောင့်နေကြ တယ်….စောင့်ရင်းနဲ့ ညနေစာထမင်းစားပြီးတော့ ဒီနေ့တော့ခေါ်မတွေ့တော့ဘူးထင်တာ….ညနေ၅း၀၀နာရီထိုး တော့ အရီကိုခေါ်ပြီး ထလရ တဲကိုဆင်းသွားတယ်…ရေချောင်းဘေးမှာတင်စန်းဦး၊မငွေ၊နဲ့တာတီးပိုးတို့ပန်းကန် တွေဆေးနေတာတွေ့လို့…. ဟေ့တာတီးပိုး… တို့ကိုဒီနေ့ကလေးတွေနဲ့တွေ့ပေးဘို့အစီအစဉ်ရှိရဲ့လားမေးတော့ တွေ့ပေးမှာပါ…ရှိပါတယ်ပြောတယ်…. အေးအဲဒီအစီအစဉ်ပျက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်း နင်တို့ဥက္ကဋ္ဌကိုသွားပြော ပေး….ငါ(ကိုရဲအမေ)ကဥက္ကဋ္ဌနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့ပြောပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့ကြတယ်…..
မကြာခင်မှာဘဲခုံတွေရွှေ့ပြီး ကိုယ်တို့အားလုံးကိုလာခေါ်တယ်….ထလရ တဲမှာဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့၊ ကလေးတွေ မိဘတွေဆုံနေကြပြီး ဥက္ကဋ္ဌက ကလေးတွေထားခဲ့ပြီး ပြန်ကြဘို့နဲ့…. ဘယ်လိုစီစဉ်ကြသလဲဆိုပြီးမေးတော့ပထမမမြင့်မြင့်ကြည်နဲ့အန်တီစန်းက တခါတည်းပြန်ထည့် ဘို့ပြောတယ်…. သူတို့ကလည်းဗဟိုကအမိန့်မရရအောင်စောင့်ပြီးမှထည့်မှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး တစ်ယောက်စောင့်နေခဲ့ဘို့ပြောတယ်…. အန်တီစန်းကလည်းသူနေခဲ့မယ်….ကိုမောင်မောင်က တစ်ယောက်ကျန်နေရင်အဲဒီတစ်ယောက်နဲ့ သူလည်းနေခဲ့မယ်….သူတာဝန်ယူပြီးခေါ်လာရတဲ့အတွက် လို့ပြောတယ်….အဲဒီလိုနဲ့ကျန်နေခဲ့ဘို့
ကိစ္စပြောကြရင်းကလေးတွေကအားလုံးကိုပြန်ခိုင်းတယ်…. ကလေးတွေနဲ့တိုးတိုးတိုင်ပင်ကြတော့ နောက်၂လကြာမှ၃ဦးအဖွဲ့က ပြန်လာမယ်….အခုတော့အားလုံးပြန်ကြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်….ဒါနဲ့ဘဲပြန်ကြမယ့်ရက်ကို ၅.၄.၁၉၉၂ လို့သပ်မှတ်ပြီး ကားစီစဉ်ဘို့ပြောလိုက်ကြတယ်….ကလေးတွေအားလုံးကိုလည်း သူတို့ကိုအပ်ခဲ့တယ်…
နောက်နောင်ဒီအဖြစ်မျိုးတွေ မကြားရအောင်….ကလေးတွေအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်မိတဲ့အတွက်လုံခြုံမှု ရှိအောင်အပ်ခဲ့ရတယ်….သူတို့ကလည်းစိတ်ချပါ အဖွဲ့အစည်းတခုခုလာတာနဲ့ပြန်ထည့်မှာပါလို့ ကတိပြုကြပြီး…မပြန်ခင်ကလေးတွေနဲ့အတူနေဘို့ခွင့်တောင်းတယ်…နေခွင့်ရတယ်…ဘိုဘိုနဲ့ နန်းအောင်ထွေးကြည် ကတော့ သူတို့အမေတွေနဲ့ အတူညအိပ်ခွင့်ရတယ်….
မနက်ပိုင်းထမင်းစားသောက်ပြီးကလေးတွေ မိဘတွေနဲ့အတူလာနေကြတယ်…..ဂျပန်ကြီးကလည်းသူ ရောက်တာ(၂.၄.၁၉၉၂)နေ့မှာတစ်လပြည့်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တို့ကိုမာစကတ်နဲ့ ထန်းလျှက်တွေလာပေးသွား တယ်….ကလေးတွေညနေစာချက် ဘို့ပြန်သွားရင်း နဲ့မုန့်ကြိတ်လာကြတယ်…..မုန့်လင်မယားဆိုတဲ့မုန့်လေး တွေလုပ်စားကြတယ်….သားတွေကလည်းကြော်လိုက်စားလိုက်နဲ့ ပျော်နေကြတယ်….(၅၀၁)ရင်းမှူးသိုက်ထွန်းဦး တို့လည်းလာစားကြတယ်….တာတီးပိုးကလည်းပြန်ကာနီး အန်တီကြီးကို အဖွား အဖွားနဲ့ခေါ်ပြီး …..ကိုယ်တို့ ထမင်းစားရင် သူလည်းဆာပြီဆိုပြီး ၀င်ဝင်စားတယ်…..ည၁၀း၀၀နာရီ ထိကလေးတွေနဲ့ပြောကြဆိုကြပြီး သူတို့ ပြန်တော့အိပ်ယာဝင်ကြတယ်….
ဒီနေ့လည်းကလေးတွေတနေ့လုံးလာနေကြတယ်….ညနေစာစားပြီးတော့ကျော်နိုင်ဦးကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ မလာကြတော့ဘူး….ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖို့အတွက် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ပဋ္ဌာန်းတိုက်နေကြတယ် တဲ့….ဂျပန်ကြီးကညနေ ၅း၀၀နာရီလောက်ထဲကလာနှုတ်ဆက် တာ….၁၀း၀၀နာရီမှ ပြန်သွား တယ်…. အလ္လာပ သလ္လာပ ပြောလိုက် ကိုယ်တို့ကိစ္စတွေပြောလိုက် အကူအညီတောင်းလိုက်နဲ့ပေါ့….၁၀း၀၀နာ ရီကျော်တော့ ကိုယ်တို့လည်းအိပ်လိုက် ကြတယ်….
မနက်စောစောထပြီးအထုတ်တွေပြင်ထားကြတယ်….ကားကစောစောလာမယ်ထင်တာ….မနက်စာကိုမစားတော့ပါဘူးဆိုတော့ အန်တီတို့စားပြီးမှသွားရမှာလို့ပြောတယ်….ထမင်းလည်းမစားချင်ကြတော့ဘူး… တင်စန်းဦးနဲ့မငွေတို့ကဈေးကအပြန် အီကြာကွေးတွေလာပေးတယ်….မမြင့်ကြည်ကလည်း ညကအိပ်ရေးပျက်လို့ ခေါင်းမူးပြီးအန်…ဘိုဘိုကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နဲ့ပေါ့…..ကလေးတွေကိုလည်းထမင်း
မချက်နဲ့…ထောက်လှမ်းရေးတဲကချက်ပြီးမိဘတွေနဲ့အတူစားရမှာလို့ပြောတယ်….သိပ်မကြာဘူးကျော်မြင့်နဲ့ တစ်ယောက်လျှောက်လာ တာတွေ့တယ်….ကားပါလာပြီပြောရင်းဥက္ကဋ္ဌ တဲကိုတက်သွားတယ်….
ကိုယ်တို့လည်းထမင်းစားဘို့လာခေါ်တော့ဆင်းသွားကြတယ်….စစ်ရုံးမှာမနက်စာကျွေးတာကိုကလေး တွေနဲ့အတူစားရတယ်….ဥက္ကဋ္ဌလည်းအတင်းခေါ်လို့ဝင်စားတယ်…ကျန်တဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်တွေနဲ့ အဖွဲ့တွေက ဘေးကနေပြီး လိုအပ်တာတွေညွှန်ကြားနေတယ်…. ကိုယ်တို့သားသမီးတွေအသားမစားရ တာကြာလို့ စားလိုက်ကြတာ ၅ပန်းကန်လောက်ကုန်တယ်…သူတို့ကိုကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ် ရတယ်… .အိမ်မှာဆိုဂျီးများတဲ့ ကလေးတွေ…ဒီမှာဒုက္ခခံနေကြတာမြင်ရတော့စိတ်မကောင်းကြဘူး….
ရဲဘော်တစ်ယောက်ပြောဘူးတယ်… ရှေ့တန်းထွက်တုန်းကလားတရုပ်တွေ ကုန်တင်ရင်းနဲ့ လားတကောင်အမောဆို့ပြီးအသက်ငင်နေတယ်တဲ့….တရုပ်ကစိတ်ပျက်ပြီးထိုင်နေတယ်…. လားကတော်တော်နဲ့ အသက်မထွက်ဘူး….ကျောင်းသားတပ်ကရဲဘော်တွေက လားသေရင်အသားစား ရတော့မယ်ဆိုပြီး ပျော်ပြီးဒါးသွေး နေကြတယ်တဲ့….ထမင်းစားပြီးတော့ကားက၁း၀၀နာရီမှာထွက်မယ်လို့ ဥက္ကဋ္ဌကပြောတယ်….ဂျပန်ကြီးကလည်းကောက်ကာငင်ကာနဲ့ပြန်လိုက်မယ်လို့သိရတယ်… .အစကတော့မေလတတိယပတ်မှပြန်မယ်ပြောထားတာ….ခုတော့ကိုယ်တို့ကားနဲ့ပြန်လိုက်မယ်ဆိုတော့ ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်ပေါ့…..
လန်းနဲ့ သြော်…ငါ့သားတွေမထွက်တာ အထဲမှာအလုပ်လုပ်နေကြတာကိုးလို့တွေး မိတယ်….ကျော်နိုင်ဦးနဲ့ သားကအမေအဖေနားမကပ်ဘူး….ကျန်တဲ့ကလေးတွေကသူတို့မိဘတွေနားတတွတ်တွတ်နဲ့…. ကိုယ်လည်းသားကို အနားခေါ်ပြီး ကြက်ခြေနီလာရင်လိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ခဲ့ဘို့နဲ့…. ဟိုဘက်မှာဘာမှ မဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောတယ်.. အစဉ်ပြေရင်အားလုံးပြန်လိုက်လာမှာဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်…(၅၀၁)ရင်းမှူးသိုက်ထွန်းဦးကလည်းမိဘတွေလာတာအားကျနေလားမသိဘူး….ကိုယ်တို့သားသမီးတွေ နဲ့ပဲလာလာနေတယ်….ထမင်းအတူစားတယ်…. သူ့ကြည့်ရတာလည်းသိပ်မရွှင်ဘူး….သားကို အဖေကို ဘာမှာဦးမလဲမေးတော့…..သူမကြာခင်ပြန်လာမှာပါလို့ ပြောပေးပါတဲ့…..ဒါနဲ့ ၁၂းး၃၅ရှိတော့ ကား ကရောက်နေပြီ….ကားဆီသွားကြတယ်…. ကားနားမှာ ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့လည်းရောက်နေတယ်…
ကလေးတွေကမိဘတွေအထုပ်တွေလွယ်ပြီး ကားပေါ်တင်ပေးတယ်….ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ကလည်း ကိုယ်တို့ ရှိနေတုံး သူတို့မှားတာလွန်တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီး လက်အုပ်ချီကန်တော့တယ်….. ကားပေါ်တက်ခါနီးမှာ ကလေးတွေအားလုံး ထိုင်ပြီးကန်တော့ကြတော့ မျက်ရည်မဆယ်နိုင်ကြဘူး… .မျက်ရည်တွေကြားကဘဲဆုပေးခဲ့ရတယ်…..ကားက၁း၃၀မှာထွက်တယ်….ကလေးတွေကတော့ မိဘတွေ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့မျက်ရည်မကျအောင်ထိမ်းနိုင်ပေမယ့်ကိုယ်တို့မိဘတွေကတော့ မျက်ရည်တွေရှိုက်သံတွေနဲ့ကားခေါ်ဆောင်ရာကိုပါခဲ့ရတယ်……တစတစကလေးတွေနဲ့ဝေးခဲ့ရပြီဆိုတဲ့အသိနဲ့တလမ်းလုံးငိုလာခဲ့ရတယ်….သားသမီးတွေမပါလာတဲ့အတွက်အလိုမကျဖြစ်တော့ပိုပြီးမွန်းကြပ်
ဆမားရောက်တော့၂း၁၅လောက်ရှိပြီ….PASSPORT ထုတ်ပြီးဆက်ထွက်လာကြတာ ၄း၃၀တော့ယင်ကျန်းရောက်တယ်….ယင်ကျန်းမှာညနေစာစားကြတယ်…. ကျော်မြင့်ကလည်းဟင်းမျိုးစုံအောင်မှာကျွေးတယ်...သိပ်ပြီးမစာနိုင်ကြတော့ဘူး…..ယင်ကျန်းက၅း၃၀လောက်ဆက်ထွက်တယ်… ဟိုဆောင်ရောက်တော့ကားဓာတ်ဆီပြတ်လို့ရပ်သွားတယ်….ကားသမားကဓာတ်ဆီရှာထည့် ပြီးဆက် ထွက်ကြတယ်….ကားပေါ်မှာ လည်း ဘိုဘိုတို့ နန်းအောင်ထွေးကြည်တို့သီချင်းတွေဖွင့်လာတော့ သူတို့မိဘတွေမဆိုထားနဲ့ကျန်တဲ့မိဘတွေတောင်မျက်ရည်ကျရတယ်…. ဆက်ထွက်လာကြတာည၁၂း၀၀မှာ ရွှေလီကို ရောက်တယ်… ကျော်မြင့်နဲ့ဂျပန်သတင်းထောက်ကဓာတ်ဆီထည့်ပြီးဆက်ထွက်သွားကြတယ်.... ကိုယ်တို့က ငြိမ်းချမ်းတည်းခိုခန်းမှာတည်းကြတယ်….